Waa maxay Noocyada Kansarka ee Daaweynta Proton lagu daweyn karaa? - Kalifoorniya Kalifoorniya
Waa maxay Noocyada Kansarrada Daweynta Bukaan-socodka Proton?
Daaweynta 'Proton therapy' waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah daaweynta lymmaamka, kansarka naasaha, kansarka naasaha, kansarka qanjirka, kansarka sanbabada, kansarka cunaha, kansarka qanjirka tayroodh, iyo xaalado kale oo kala duwan. Daaweynta 'Proton therapy' waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo marxaladaha hore iyo kansarka horumarsan sababtuna waa waxyeelada ugu yar ee shucaaca proton iyo awooda ay u leedahay daweynta burooyinka xunxun iyo kuwa xunba. Heerka guusha ee daaweynta proton waxay kuxirantahay marxaladda, goobta kansarka, iyo qodobo kale.
Baadh sida loo daaweyn karo daaweynta proton:
Daaweynta 'Proton therapy' waa daaweyn wax ku ool ah oo loogu talagalay kansarka qanjirka 'prostate'. Ragga ugu badan ee qaba kansarka qanjirka 'prostate' waa u tartamayaal daaweynta proton.
Daaweynta 'Proton therapy' waxaa loo isticmaali karaa daaweynta kansarka naasaha. Daraasad, 99% dumarka qaba kansarka naasaha bidix bidix waxay la kulmeen hoos udhaca shucaaca wadnaha.
Kansarka Madaxa iyo Caanaha
Kansarrada madaxa iyo qoorta sida larynx, sinus, tonsil, iyo kansarka dhuunta ayaa lagu daaweyn karaa daaweynta shucaaca proton. Daaweynta kansarka madaxa iyo qoorta way ku kala duwan yihiin meelaynta iyo meesha burada.
Kansarka Caloosha iyo Bile Duct Kansarka
Cudurka kansarka naasaha waxaa lagu daaweyn karaa daaweynta proton. Fursadaha daaweynta ayaa kala duwanaan kara iyadoo ku xiran marxaladda kansarka.
Labada nooc ee 'Hodgkin's' iyo 'non-Hodgkin' 'lymphoma' waxaa lagu daaweyn karaa daaweynta shucaaca ee proton. Cilmiga Laser-ka wuxuu u oggolaanayaa cilmi-baaraha shucaaca inay si wax ku ool ah u bartilmaameedsadaan unugyada kansarka ee nidaamka dheecaanka.
Labada unug ee yar iyo kansarka sanbabada ee unugyada yar waxaa lagu daaweyn karaa daaweynta proton. Daaweynta shucaaca waa ikhtiyaar daaweyn oo macquul ah oo loogu talagalay bukaanada qaba cudurada kale ee sambabaha iyo wadnaha.
Shucaaca cilmu-nafsiga ee shucaaca cilmiyaysan ayaa had iyo jeer ku daweeya kansarka cunaha iyada oo la adeegsanayo daaweynta proton sababta oo ah meesha adag. Kansarka kale ee madaxa iyo qoorta sidoo kale waxaa lagu daaweyn karaa daaweynta proton.
Noocyo kala duwan oo ah kansarka qanjirka tayroodh ayaa lagu daaweyn karaa daaweynta proton. Daaweynta 'Proton therapy' waa mid ka mid ah daweynta ugu wanaagsan ee kansarka qanjirka tayroodhka maxaa yeelay waxay gacan ka geysan kartaa yareynta shucaaca unugyada caafimaadka qaba ee ku xeeran.
Badanaa qalliinka ka dib, daaweynta proton waa ikhtiyaar daawayn oo lagula taliyo daaweynta kansarka qalliinka. Cadadka iyo muddada kalfadhiga daaweynta ayaa ku kala duwan bukaanka.
Daaweynta 'Proton therapy' waa daaweyn loo heli karo kansarka hunguriga. Daraasadaha ayaa muujinaya in qiyaasta shucaaca wadnaha ay aad uga yar tahay daaweynta proton beam-ka marka loo eego shucaaca raajada.
Sababo la xiriira teknoolojiyadda saxda ah ee shucaaca, waxaa jira dhowr faaidooyin oo ah daaweynta proton ee kansarka caloosha. Kansarrada caloosha ku jira waxaa loo daaweyn karaa si sax ah oo saamayntooda yar.
Sarcoma wuxuu ka jawaabi karaa daaweynta shucaaca proton therapy shucaaca. Qaar ka mid ah saromayaasha lagu daaweyn karo daaweynta proton-ka waxaa ka mid ah: lafaha, chrondrosarcoma, iyo Ewing sarcoma.
Saddexda nooc ee ugu weyn ee kansarka kaadiheysta (urothelial, unugyada squamous, iyo adenocarcinoma) ayaa lagu daaweyn karaa daaweynta proton. Yaraanta shucaaca unugyada caafimaadka qaba iyo waqtiga dhakhsaha leh waa faa iidooyinka qaarkood ee daaweynta proton ee kansarka kaadiheysta.
Kansarka Afka waxaa sababi kara isticmaalka tubaakada, isticmaalka aalkolada, HPV, iyo qodobo kale. Daaweynta Proton waa ikhtiyaar loogu talagalay dadka lagu ogaado kansarka afka.
Cudurka kansarka beerka waxaa lagu daaweyn karaa daaweynta proton. Daawada 'Proton therapy' waxaa loo isticmaalaa xakameynta burada waxaana laga yaabaa in lagula taliyo iyada oo kuxiran heerka kansarka beerka.
Qalliinka ka dib, daaweynta proton ayaa noqon kara daaweynta ugu fiican kansarka carrabka. Iyada oo ay ugu wacan tahay meesha adag, daaweynta proton shucaaca ayaa loo isticmaalaa in looga hortago waxyeelada meelaha hareeraheeda ah.
Sababta ugu badan ee keenta kansarka dabada waa HPV. Kansarka sanka waxaa lagu daaweyn karaa daaweynta proton si loo yareeyo dhibaatooyinka soo raaca.
Maskaxda Maskaxda iyo lafdhabarta
Kansarka maskaxda iyo lafdhabarta, oo ay ku jiraan burooyinka xun-xun iyo kuwa aan khatarta lahayn, ayaa lagu daaweyn karaa daaweynta proton. Daraasadaha ayaa muujinaya in kansarka CNS ee lagu daaweeyo daaweynta proton ay boqolkiiba 50 hoos u dhacday halista burooyinka la xiriira shucaaca sare.
Kansarka Xanuunka Kansarka
Xulashada daaweynta kansarka malawadka waxay kuxirantahay marxaladda. Daaweynta 'Proton' ee kansarka malawadka waxaa badanaa la bixiyaa ka hor ama ka dib qalliinka.
Daaweynta kansarka sanka waxaa lagu sameyn karaa daaweynta proton. Daaweynta loo yaqaan 'Proton therapy' ee kansarka sanka ayaa inta badan lagu xushaa daaweynta shucaaca ee joogtada ah sababta oo ah bartilmaameedka saxda ah.
Kansarka carruurnimada ee caadiga ah waa limfooma, dhiig-laawe, iyo medulloblastoma. Daaweynta 'Proton therapy' waa ikhtiyaar u fiican kansarka carruurta sababta oo ah qiyaasaha si aad ah loo xakameeyo.
Daaweynta loo yaqaan 'Proton therapy' ee kansarka caloosha iyo mindhicirka ayaa badanaa loo tixgeliyaa inay ka fiican tahay tan daaweynta shucaaca sababta oo ah awoodda ay u leedahay inay ku weerarto daaha burooyinka lakabka. Daaweynta 'Proton therapy' waxaa loo isticmaali karaa daaweynta noocyada kala duwan ee kansarka caloosha iyo mindhicirka oo ay ka mid yihiin: kansarka mindhicirka, kansarka malawadka, kansarka dabada, iyo kansarka caloosha.
Kansarka Soo noqnoqda iyo Sare
Daaweynta 'Proton therapy' waa ikhtiyaar u ah daaweynta kansarka ah iyo kansarka caadiga ah. Adigoo si toos ah u bartilmaameedsada burooyinka iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyadda iskaanka qalin-qoriga, daaweynta proton waxay ilaalisaa xubnaha caafimaadka qaba iyo unugyada ku xeeran burooyinka sare.
Kansarka mindhicirka waxaa lagu daaweyn karaa shucaaca loo yaqaan 'proton therapy radiation'. Dhererka daaweynta ee kansarka mindhicirka wuu kala duwan yahay iyadoo ku xiran bukaanka.